विदेश Archives - पाल्पा अनलाइन
नेपालकाे पछिल्लाे राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर भारतले चासाे दिएकाे बताएकाे छ । बिहीबार प्रेस ब्रिफिङका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालमा प्रतिनिधि संसद् विघटनपछि देखिएकाे पछिल्लाे राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले 'नाेट' गरेकाे बताएका हुन् ।
जम्मू–काश्मीरकी पूर्व मुख्यमन्त्री १४ महिनापछि प्रशासनले रिहा
उनले जम्मू कश्मीरको समस्या समाधानका लागि हजारौं मानिसले ज्यान दिएकाले यो संघर्षलाई जारी राख्ने बताएकी छन्। उनले देशका विभिन्न भागमा हिरासतमा राखिएका जम्मूकश्मीरका नागरिकको रिहाइका लागि पनि माग गरेकी छन्।
चिनमा तयार भएको कोरोना खोपको मूल्य तोकियो: यस्तो छ मुल्य
काठमाडौं: चीनिया कम्पनी सिनोफार्मले आफूले परीक्षण गरिरहेको कोरोना विरुद्धको खोपको मूल्य एक सय ४० डलर अर्थात झण्डै १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । परीक्षण भइरहेको र नोभेम्बर...
नवलपरासी सेवा समाज कतारको प्रथम साधारण सभा तथा अधिवेशनले लौडारीलाई अध्यक्ष
कमल ज्ञवाली पाल्पा पुष–१३ सन २०१९ डिसेम्बर २९ मा अल दोसरी पार्क सहानियामा भएको नवलपरासी सेवा समाज कतारको प्रथम साधारण सभा तथा अधिवेशनले सजन लौडारीलाई सर्वसमितिको निर्वाचित अध्यक्ष को जिम्मेवारी दिएको छ।...
मोहनविक्रम सिंह भेनेजुएलाको स्थितिबारे नेकपा (मसाल) कोतर्फबाट यही माघ ११ गते मैले तल लेखे अनुसारको वक्तव्य जारी गरेको थिए ः “भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोका विरुद्ध अमेरिकाले अपनाएको हस्तक्षेपको नीतिको नेकपा (मसाल) ले तीव्र शब्दमा भत्र्सना...
हाइड्रोजन बमको सफल परीक्षण गरेको उत्तर कोरियाको दाबी !!!
उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बमको सफल परीक्षण गरेको घोषणा गरेको छ । उसको दाबी छ कि यो बमलाई मिसाइलमा लोड गर्न सकिन्छ ।
नासामा जागिर खान ९ बर्सियको आवेदन:बैज्ञानिकहरु चकित!!
अमेरिका - अमेरिकामा चार कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाको ध्यान तानेको छ । गत साता नासाले साना जीवाणुहबाट अन्य ग्रहलाई जोाउन सक्ने क्षमता भएको ब्यत्तिलाई ग्रह संरक्षण अकिृत पदमा आवदेन माग गरेको थियो...
जर्मनको संसदीय निर्वाचन:मर्केल फेरि पनि सफल हुँदै!!!
आगामी सेप्टेम्बरमा हुने केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन आउनु अघि गरिएको एक सर्वेक्षणमा फेरि पनि जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल नै सबैभन्दा लोकप्रिय देखिएकी छन्। निर्वाचनको करिब दुई महिनाअघि गरिएको उक्त सर्वेक्षणअनुसार चौथो कार्यकालमा पनि उनी नै चान्सलर...
को हुन भारतका दलित जातिका रास्ट्रपति कोबिन्द?
रामनाथ कोविन्द भारतको चौधौं राष्ट्रपतिमा बिहीबार निर्वाचित भएका छन्। भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कोविन्द कांग्रेस आई नेतृत्वको गठबन्धनकी उम्मेदवार मिराकुमारलाई हराएर राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्। गत सोमबार ४ हजार १ सय...